Global Voices teny Malagasy » Nanao Ahoana Ny Fihetsik’i Japan Tamin’ny Fandresen’i Donald Trump · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Novambra 2016 16:06 GMT 1	 · Mpanoratra Nevin Thompson Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Mediam-bahoaka, Politika
Fanamarihan'i Trump tao amin'ny Nippon News Network  (NNN) tamin'ny 27 aogositra 2015: “Hanana fifandraisana mahafinaritra isika miaraka amin'i Japan. Tiako i Japan.” Dikasary avy amin'ny lahatsary navoaka tao amin'ny YouTube .
Nandritra ny fanentanana fifidianana ho filoham-pirenena 2016 tao Etazonia, dia firenena iray amin'ireo maro nanaovan'i Donald Trump fanamarihana manokana i Japan, mitaraina manokana amin'ny lazaina ho fombam-barotra tsy ara-drariny ataon'ity firenena aziatika ity. Araka ny nolazain'ny New York Times , Ny fitarainan'i Trump “dia mampahatsiahy vanim-potoana hafa, raha niroborobo ny toekaren'i Japan ary nividy taratasim-bola amin'ireo amboara amerikana tahaka ireo studio-ntsarimihetsika sy ny Foibe Rockefeller ry zareo.” Lahatsoratra amin'ny gazety fanehoan-kevitra iray nivoaka tao Japan tamin'ny Aogositra 2016 no mametaka an'i Trump ho “miraikitra any amin'ny rakotry ny taompolo 1980.” 
Na miorina amin'ny zava-misy marina na tsia, dia mahazo ny hozatra ao Japan ny fanehoan-kevitra feno fihantsiana ataon'i Trump. Raha heverina fa hihaona amin'i Donald Trump ao New York amin'ny 17 Novambra  ho avy izao ny Praiminisitra Japoney Shinzo Abe, dia tsy misy mahalala izay havoakan'ny hoavy ny ao Japan rehefa voafidy ho filoha i Trump.
Indreto ary ny tena mampanahy indrindra ny Japoney amin'ny mahafiloha an'i Trump, mifototra amin'izay mirona malaza ao amin'ny Twitter Japoney  vantany vao nivoaka tamin'ny 9 novambra ny voka-pifidianana.
Rehefa hita hahazo ny prezidansa i Trump ny takarivan'ny tao Etazonia saingy fanombohan'ny andro fiasana any ampitan'ny Riaka Pasifika, dia nitsontsorika ny fifanakalozan-tahiry Nikkei  raha niakatra ny yen.
Vaovaon'ny Bloomberg Japan: Misafotofoto ny tsenan'izao tontolo izao rehefa nandresy tamin'ny fomba mahavalalanina i Trump — nitsamboatra ny Yen, ny volamena.
Niaina fisafotofotoana ny tontolon'ny tsena tamin'ny 9 novambra rehefa resin'ilay repoblikana Donald Trump ny kandidà demaokraty Hillary Clinton.
Trans-Pacific Partnership [Fiaraha-miasa Trans-Pasifika]
Efa nampanantena  ny filoha voafidy Donald Trump ny hanakana na hanafoana ny volavola Trans-Pacific Partnership  (TPP). Tanjona lehibe ara-politika  teo amin'ny praiminisitra japoney Abe Shinzo ny nanasoniavana ny TPP. Ankehitriny manjavozavo izay hanjò ny TPP.
Voarahona avy amin'ny fandresen'i Trump ny TPP: Ankehitriny nandresy tamin'ny fifidianana ao Etazonia i Donald Trump, mety ahiana ny fandaniana ny dinan'ny TPP. Mitodika any amin'ny andry lehibe ny fanalalaham-barotra natombok'i Etazonia .
Ny toe-karena Japoney
Manahy ny maro fa ny fanoheran'i Trump ny TPP dia hanana fiantraikany henjana amin'ny “Abenomika”  — andiam-panapahan-kevitra ara-politika asandratry ny governemantan'i Abe hamelomana indray ny harin-karena ao Japan — sy ny toekarena Japoney. Ny fiantraikany eo noho eo tamin'ny fandresen'i Trump tamin'ny fifidianana dia ny endaka (円高), na ny fisondrotan'ny sandan'ny yen Japoney izay mamparefo ny toekarena japoney mifantoka amin'ny fanondranana-fanafarana.
Amin'izao fandresen'i Trump sy ny fahasarotan'ny fampanan-kery ny TPP izao, tratran'ny felaka mahafaty ny Abenomika.
Ankehitriny voafidy ho filohan'i Etazonia i Donald Trump, ho sarotra dia sarotra ny hampanakery ny Fiaraha-miasa Trans-Pasifika. Niakatra ny yen eo amin'ny tsena ara-bola manerantany.
Fifandraisana ara-piarovana amin'i Etazonia
Manana fifandraisana ara-piarovana matanjaka iarahana amin'i Etazonia i Japan hatramin'ny taona 1960. Mandoa vola amin'izany i Japan  ary mampiantrano ny miaramila amerikana ao andrefan'i Pasifika, saingy efa niteny i Trump fa mila mandoa vola bebe kokoa i Japan.
Raha nanontanian'ny mpanangom-baovao Japoney i Trump tamin'ny Aogositra 2015, dia namaly hoe , “Hanana fifandraisana tsara amin'i Japan izahay. Tiako i Japan.” Avy eo i Trump niteny tamin'ny mpanangom-baovao Japoney fa tsy manam-pikasana ny hanova ny Fifanekem-Piarahamiasa Ara-Piarovana ifanaovan'i Etazonian'i Amerika sy i Japan izy , izay fantatra amin'ny hoe Anpo (安保) ao Japan.
Taorian'ny andrenesana ny fandresen'i Trump, dia nampanantena hiasa miaraka amin'ny filoha vaovao ny minisitry ny fiarovana ao Japan. Nandika ny fanamarihan'ny minisitry ny fiarovana ho fampitomboana ny isan'ny miaramila japoney ny mpisera Twitter iray.
Tiako ilay tsiky amin'ny tavan'i Inada [Minisitry ny Fiarovana Japoney]. Fotoana izao hampitomboana ny herim-piarovantena japoney!
“Satria efa nambara ho Filoha i Trump, dia nampanantena ny hanamafy ny fiarahana ny minisitry ny fiarovana japoney.”
Tobim-pamaharan'i Etazonia ao Okinawa
Tokotokony ho 20 isanjaton'i Okinawa no natokana ho fametrahana miaramila, ary mihoatra ny 100.000 ny Amerikana ao Okinawa , izay manana mponina 1,4 tapitrisa; ny ankamaroan'izy ireo dia na mpiasa ao amin'ny tafika sy ireo departemanta ao aminy na mpiasa sivilin'ny departemantan'ny fiarovana.
Efa ela ihany koa no nisian'ny fanoherana ny toby miaramila amerikana ao Okinawa  [mg] ary niteny i Trump fa te-hanaisotra ny tafika amerikana aho Japan izy.
Trump filoha voafidin'i Etazonia: Inona no mitranga amin'ireo tobim-pamaharana ao Okinawa sy ny politikan'i Etazonia manoloana an'i Japan? Mpanangom-baovao roa no nandanjalanja izany.
Ankehitriny voafidy ho Filoha i Trump, tena ho sarotra dia sarotra ny faravodilanitr'i Japan.
Mihazatra an'i Trump ny vahoaka Japoney
Voafidy ankehitriny i Trump, manomboka mihazatra an'ilay filoha voafidy amerikana ny vahoaka japoney, izay tsy mahalala izay mitranga isan'andro amin'ny politika amerikana.
Ho fandraisany anjara, nanomana tranonkala kely natokana ho amin'ny nifidianana an'i Trump, miaraka amin'ny lahatsarim-panadihadiana ny NHK, fampitam-baovaom-pirenena ao an-toerana.
Voafidy ho filohan'i Etazonia i Donald Trump :
Antsoin'ny fampitam-baovao ao Etazonia ho “fandresena mahavalaketraka” ny fandresen'i Trump. Manazava ny nahatonga izany ity tranonkalam-panadihadiana ity.
Toe-javatra tsy maintsy hitranga?
Nahatsikaritra tantara tao amin'ny AFP avy ao Shina  manolo-kevitra fandresen'i Trump an'i Hillary Clinton ho toe-javatra tsy maintsy hitranga ny Japoney iray mpisera Twitter :
4 Novambra: Naminany ny fandresen'i Trump ny rajako iray tao Shina.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/11/11/91767/
 Dikasary avy amin'ny lahatsary navoaka tao amin'ny YouTube: https://youtu.be/WvWE5c-8Cdo
 “miraikitra any amin'ny rakotry ny taompolo 1980.”: http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/08/09/commentary/japan-commentary/trump-stuck-1980s-time-warp-sony-rant/#.WCPTFtArLMg
 17 Novambra: https://www.japantoday.com/category/politics/view/abe-trump-likely-to-meet-in-new-york-on-nov-17
 mirona malaza ao amin'ny Twitter Japoney: https://twitter.com/search?q=%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E6%B0%8F%E5%8B%9D%E5%88%A9&src=typd
 nitsontsorika ny fifanakalozan-tahiry Nikkei: http://www.japantimes.co.jp/news/2016/11/09/business/tokyo-stocks-plunge-morning-trading-trump-victory-possibility/
 Tanjona lehibe ara-politika: http://thediplomat.com/2015/10/what-the-tpp-means-for-japan/
 Mandoa vola amin'izany i Japan: http://mainichi.jp/english/articles/20160530/p2a/00m/0na/017000c
 dia namaly hoe: https://www.youtube.com/watch?v=WvWE5c-8Cdo
 Fifanekem-Piarahamiasa Ara-Piarovana ifanaovan'i Etazonian'i Amerika sy i Japan izy: http://www.cfr.org/japan/treaty-mutual-cooperation-security-between-japan-united-states-america/p22270
 100.000 ny Amerikana ao Okinawa: https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42645.pdf
 fanoherana ny toby miaramila amerikana ao Okinawa: https://mg.globalvoices.org/2015/11/11/75958/
 tantara tao amin'ny AFP avy ao Shina: http://www.afpbb.com/articles/-/3106806